Smart Grid - ဝီကီပီးဒီးယား
Smart Grid ဆိုသည်မှာ အဆင့်မြင့် လျှပ်စစ်သုံး ပစ္စည်းကရိယာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော လျှပ်စစ် စစ္စတမ်ကို ဆိုလိုပါသည်။ အဆင့်မြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၏ အတွက်အချက်စွမ်းအားကို အသုံးချပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲပံ့ပိုးမှုကို ကိုယ်တိုင် လိုအပ်သလို ထိမ်းသိမ်းနိုင်သည့် ဖန်ရှင်ကို ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းကရိယာများကို အသုံးချပြီး၊ စွမ်းအင်ခြွေတာမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပီပြင်မှုတိုးတက်ရေးကို ရည်မှန်းထားတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကွန်ယက်ကို ဆိုလိုပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ စတင်ခဲ့သော အကြံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Smart ဟု အမည်ပေးထားသည့်အတိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်သည့်နေရာမှအစ အသုံးပြုသည့်လျှပ်စစ် ပစ္စည်းကရိယာများ တိုင်အောင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ပျူတာ၏ အဆင့်မြင့် ထိမ်းချုပ်ရေးစနစ်ကို ထည့်သွင်းထားသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ဆက်သွယ်ပြီး၊ လက်ရှိ ဗဟိုထိမ်းချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် ထိမ်းချုပ်ခြင်းမပြုနိုင်သော ကိုယ်ပိုင်ခွဲခြမ်းထိမ်းချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ယက်အတွင်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ပံ့ပိုးမှု အနေအထားကို အသင့်တော်ဆုံး ထိမ်းချုပ်ပြီး မလိုအပ်ပဲဖြစ်ပွားတတ်သော ဘေးအန္တရာယ်နှင့် အလွန်အကျွံဓာတ်အားလိုအပ်မှု အပေါ်မှာ ခံနိုင်ရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့်၊ ထိုလိုအပ်ချက်များအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ စတင်လာရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အားနည်းချို့ယွင်းလာပြီဖြစ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးသုံးစွဲမှု့ဓာတ်ကြိုး ကွန်ယက်အား၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး အကုန်အကျသက်သာ၍ လုံခြုံစိတ်ချရသော ပံ့ပိုးမှုစနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ရှာဖွေရာမှ မွေးဖွားလာသော စနစ်ဖြစ်၏။ လျှပ်စစ်ကွန်ယက်အပေါ်တွင် ပံ့ပိုးသူနှင့် သုံးစွဲသူအကြားကို ဒီဂျစ်တယ် ဆက်သွယ်ရေးကြိုးနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အကြံအစီတွင် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ကွန်ယက်နှင့်ဆက်သွယ်မည့် အကြံတွင်ရှုံးနှိမ့်ခဲ့ရသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများက အဆင့်မြင့် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဈေးကွက် ကို ထိုးဖောက်ရန်အကြံကောင်းဟု ပါဝင်ရာမှ၊ လက်ရှိ အိုင်တီလုပ်ငန်းများကလည်း လူနေအိမ်အတွင်းသို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ယက်ကို ထည့်သွင်းရန် အခွင့်အရေးကောင်းဟု အားလုံးပါဝင်ခဲ့သော စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အမေရိက ပြည်ထောင်စုမှာသာမက အခြားသောနိုင်ငံများတွင်လည်း ဟိုက်ဘရစ်ကားများ၊ လျှပ်စစ်ကားများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအားသုံး အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အစရှိသည်တို့ကို တဖြည်းဖြည်း သုံးစွဲလာမှုကလည်း အမေရိက၏ ပြည်သူလူထုရော အစိုးရကပါ နောက်တစ်ခေတ်လျှပ်စစ် ဖြန့်ချိရေးစနစ်၏ လိုအပ်ချက်ကို ပိုမို၍ ဖိအားပေးနေစေပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အမေရိကမှ စ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ချိသုံးစွဲရေး စနစ်အသစ်ကို Smart Grid အမည်ဖြင့် စတင်နေသည့်အချိန်နှင့် တပြိုင်နက်ထဲမှာပင်၊ အခြားသော ဥရောပနိုင်ငံများတွင်လည်း အမေရိကကဲ့သို့ပင် အဆင့်မြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ချိရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရန် သုံးသပ်ချက်များ ပြုလုပ်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးမှု့မှာ တည်ငြိမ်မှုရှိနေပါသဖြင့် အခြားသော နိုင်ငံများနှင့်စာလျှင် လှုပ်ရှားမှုအားနဲနေသည်ဟု အပြောများကြပါသည်။
Smart Grid ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ချိရေး ကွန်ယက်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ အနာဂတ်နည်းပညာအား ခန့်မှန်းနိုင်မှု၊ အနာဂတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်မှု၏ ပမာဏနှင့် အရည်အသွေးတို့၏ ခန့်မှန်းချက်၊ နည်းပညာတီထွင်မှုနှင့် အခြေခံချထားမှု အစရှိသည့်ပြဿနာများလည်းရှိနေရုံသာမက၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ချိရေး ကွန်ယက်နှင့်၊ အဆင့်မြင်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အတွက်မြှုပ်နှံရမည့် အရင်းအနှီးမှာပင် လွန်စွာများပြားလွန်းလှပါသဖြင့်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများသာမက မော်တော်ကားလုပ်ငန်းအစရှိတဲ့ နယ်အသီးသီးမှ လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းပြီး၊ အထူးသဖြင့် အမေရိကနှင့် ဂျပန်လုပ်ငန်းများက ပူးပေါင်းပြီး ဖြစ်မြောက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာစနစ် သတ်မှတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေကြ၏။
အသုံးပြုသူများအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည် ဆိုသည်မှာ မသိနိုင်သေးသော်လည်း အနည်းဆုံး ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ချိနိုင်ရန် စီမံနေပါသဖြင့်၊ ကွန်ယက်တည်ဆောက်မည့် ကုန်ကျမှုကို လျှော့ပေါ့နိုင်ရန် စီမံနိုင်မှုက အဓိက လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ချက်ပင် ဖြစ်နေပါတော့သည်။
IEEEတွင် ၂၀၀၉ခုနစ် မှစ၍ P2030 ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၏သတ်မှတ်ရေး၏ အောက်တွင် သက်မှတ်သွားရန် စီစဉ်ထား၏။ တဖန် အမေရိက အစိုးရသည်NIST Archived7March 2011 at the Wayback Machine. တွင်၊ စက်ပစ္စည်းကရိယာနှင့် စစ္စတမ်ကြားတွင် အပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံစနစ် （စက်ကရိယာနှင့် စစ္စတမ်၏ စနစ်မဟုတ်သော) အား သက်မှတ်ရန် ချမှတ်ခဲ့၏။ NISTသည် အထက်ပါချမှတ်ချက်အရ EPRI နှင့် သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့၏။。
ZigBeeနှင့် HomePlug Powerline Alliance အစရှိသော လုပ်ငန်းများကလည်း လုပ်ငန်းတွင်းသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသွားရန် စီစဉ်လျှက်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
How the Smart Grid will recharge Plug-In Electric Hybrids Archived9January 2019 at the Wayback Machine.
Smart Grid Takes Off Archived 25 January 2009 at the Wayback Machine. - Sustainable Industries Magazine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Smart_Grid&oldid=674422" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၇:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။